Laanta socdaalka oo markale badhaysa kiiska nin Soomaali ah - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Laanta socdaalka oo markale badhaysa kiiska nin Soomaali ah
Hasaan:Jowhar aan ka imaadey mugow waxay leeyahiin Hargeysaa ka imaatay
La daabacay onsdag 19 november 2014 kl 16.13
Todobaadkii hore Barnaamijka Uppdrag granskning ee ka baxa Telefishinka SVT1 iyo SVTplay maalmaha arbacadda ayaa ka shifey in baaritaanada dhanka luuqadda ee laga qaado dadyowga magengeliyo doonka ah ay tayadoodu liidato, kana buuxaan qaladaad waaweyn.
Barnaamijkan waxaa lagu soo bandhigay ruux magaciisa lagu soo koobay Mohamed iyo halganka uu kulo jiro go’aan laanta socdaalka ku gaartay in loo masaafuriyo Moxamed Soomaaliland, deegaankas oo uusan weligii tagin kana soo jeedin, sida uu sheegtay. imminkana baarnaamijka UG oo caawey laga siideyn doono SVT ayaa lagu soo qaadan doonaa Go’aan cusub oo maxkamadda socdaalka ka gaartay kiiska Mohamed oo ay ku sheegtay in ay suurogal tahay in Mohamed run sheegayo kana soo jeedo magaalada Afgooye ee Kuunfurta Soomaaliya.
- Aad ayaan u faraxsanahay imminka. Waagii hore cabsi badan ayaa igu jirtay, run ahaantii. Waxaan heystaa gareen fiican, wax badan ii qabtay iyo how adag ayuu yeri Mohamed oo u waramayey barnaamijka UG markii qareenkiisu tlefoon ugu soo sheegay go’aanka kiiskiis maxkmadda socdaalka ka gaartay.
In Maxamed ka soo jeedo Soomaaliland, uusanna ka jeediin degmada uu sheegtay ee Afgpooye sidaas waxaa lagu sheegay baaritaan dhanka luuqadda oo shirkadda Sprakab sameysey ka dib markii mohamed lala yeeshey wareysi teleefoon oo socdey muddo 20 daqiiqo ah.
Maxkamadda Socdaalka waxay go’aankeeda ku sheegtay in degaanka uu ka soo jeedo uu yahay halka uu Moxamed sheegtay. Marka halkas ayaa loo eegaya hadda ka bacdii dalalbkiisa maganeliyo doonnimo.
- Dhibka waxuu yahay: Migrationsverket waxay fiirinayaan baaritaanka luuqadda, kaas oo muujinaya in aadan ka imaanin halka aad sheegatay in aad ka timid, laakiin ma daneyneyso sababtaada magangeliyo doonimo iyo halka aad sheeganeysid in aad ka timid, ayuu yeri qareen Byron Törnström oo ah wakiilka Moxamed.
Ruuxa sameeyey baaritaanka luuqadeed kuna sheegay in Moxamed ka soo jeedo Soomaaliland waxaa magaciisa lagu soo koobay kod namber oo ah EA20. Laakiin barnaamijka Uppdrag Granskning oo u kuurgalay arrinkan waxaa cadaatay in ay ka buuxaan qaladaad waaweyn. Sidoo kale barofesor Abdallah Omar Mansuur oo mid ah dadka faro ku tiriska ah ee ku xeer-dheel luuqadda soomaaliga oo Uppdrag Granskning u bandhigtay baaritaanka luuqadeed ee laga qaadey Moxamed ayaa su’aal ka keenay natiijada baaritaanka luuqadeed. Taas oo uu sameeyey ea20. Waxuuna Mansuur sheegay in ay suurogal tahay sheegashada Moxamed ee ah in uu ka soo jeedo degmada Afgooye. Middas oo Mohamed horey ugu sheegay laanta Socdaalka iyo weliba Maxkamadda socdaalka.
Ea20 ruuxa magaciisa lagu soo koobay ayuu barnaamijkan Uppdrag Granskning ka shifay in uu ka been sheegay taclintiisa, iyo weliba in uu yahay ruux danbeyo dalka ka galay oo qyb kale oo ka mid isla heyadda socdaalka aamin ku qabin unna diidey qaadashada dhalasahda Sweden. Ea20 ayaa ah ruuxa koobad ee shirkadda Sprakab u sameeya baaritaanada luuqadda ee laga qaado magangeliyo doonka ku hadla af-soomaaliga. Baaritaan luuqadeed oo kor dhaafaya shan kun ayuu ea20 sameeyey dhowrkii sanno ee ugu danbeeyey.
- Caadiyan ma jirto sabab su’aal uga qabna baaritaaka luuqadda ee laga qaado ruuxa magangeliyo doonka ah. Waxaa laga duulaa baaritanka ion uu yahay mid si serios ah loo sameeyey. Balse taas waxay ka micno tahay in la baari karo ruuxa baaritaanka sameeyey. Badanaana waxaa baaritaanka luuqadda lagu soo lifaaqaa radraaca iyo aqoonta ruuxa baaritaanka sameeyey, annaga waxaan ka duulnaa in ay run yahiin wax naloo soo gudbiyey, Ayuu yeri Ingvar Paulsson oo ka mid ahaa garsoorayaasha maxkamadda socdaalka ee kiiskiisa Mohamed xukmiyey.
Maxkamadda Socdaalka ayaa imminka aamintay Mohamed iyo qareenkiisa halkii aamini laheyd Laanta Socdaalka iyo baaritaanka luuqadda. Imminka Laanta Socdaalka waxay dib ugu noqoneysaa kiiska Moxamed iyada oo ka ambo qaadeysa in Moxamed ka soo jeedo degmada uu sheegtatay ee Afgooye.
Barnaamijkan Uppdrag Granskning waxaa caawey laga sii deyn doonaa SVT1 Saacadda markey ku beegan tahay 20:00.